Iihotele eziMnandi zaseMelika ngeXesha leGolide leKhadi lePosti yePhepha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Icandelo lokungenisa izihambi » Iihotele eziMnandi zaseMelika ngeXesha leGolide leKhadi lePosti yePhepha
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
NgoFebruwari 2000, kwabakho umboniso owahlukileyo eMetropolitan Museum of Art eNew York: “UWalker Evans kunye nePostcard.” U-Evans wayengumbhali wokufota ngenkulungwane ye-20 obonisa izityalo ezaphukileyo; Iintsapho ezabelana ngamasheya, kunye neefama zasemazantsi ezomileyo ngexesha loxinzelelo, iifektri ezinobungozi eMantla; kunye nembonakalo yobuso babakhweli bakwaloliwe baseNew York.
U-Evans waqokelela iikhadikhadi zemifanekiso kubomi bakhe bonke ngexesha lobudala begolide ukusuka nge-1900 ukuya kwi-1920s.
Le nto ikhuthazwe yinkonzo yeposi yase-United States ka-1907 egweba ukuba icala elingenanto lekhadi leposi linokubandakanya idilesi yomamkeli kunye nomyalezo.
Kwangelo xesha, iPosi yabeka ixabiso lesitampu esi-1 on kwezi postcards.
Enye into eyoncedo yayikukuhla kweendleko zemibala ye-offset enika iiposikhadi ukubonakala kwemifanekiso enombala wesandla, kunye neeblue blues, imifino kunye nobomvu.
Ngeli xesha, iindidi zekhadi leposi-lephepha zazibandakanya iihotele, iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ehlotyeni, izikhululo zikaloliwe, iimoto, iindlela zebhodi, izitrato eziphambili ezilalini, ii-capitols zikarhulumente, iifektri, imisebenzi kunye nezinye izifundo ezininzi. Okugqwesileyo kula makhadi ehotele kwaveliswa ziinkampani ezimbini: I-Curt Teich kunye neNkampani, Inc., iChicago kunye neTichnor Brothers Inc., iBoston zombini zavalwa ngo-1970. Kuqikelelwa ukuba i-Curt Teich kunye neNkampani baprinte malunga ne-400,000 yeembono ezahlukeneyo ze-United States, Canada kunye neehotele zaphesheya ngesithuba seminyaka engamashumi asixhenxe anesixhenxe.
Abazalwana bakaTichnor bavelisa amakhadi ehotele angama-25,000 ikakhulu kuwo onke amazwe. Ubuncinci be Iihotele ezinkulu zaseMelika Ngexesha leGolden Age yemifanekiso-yeposikhadi ivela kwiBarry Zaid's "Ndinqwenela ukuba ubulapha: Ukhenketho lweehotele ezinkulu zaseMelika ngexesha leGolide yeKhadi lePhepha loMfanekiso" iCrown Publishers, Inc. (eNew York 1990).
“Kodwa kumakhadi, zonke iihotele zikwinqanaba labo, Olu luhambo lokuya eMelika esinokuthi siluthathe Singacinga ukuba yile yethu siqubha phambi kweMarlborough-Blenheim kwi-Atlantic City egolide, kunxweme lolwandle okanye sihambahamba kwigadi entle ye-cactus yasePhoenix's Camelback Inn okanye ukonwabela umbono weentaba ngeefestile ezinde zePrince of Wales Hotel kwiPaki yeSizwe yamaLwandle aseCanada. Ngaba asiyiyo itafile yethu kwigumbi lokutyela eligcwele imithi, ecaleni komfula ogungxulayo ohamba kwindawo yokulala eBrookdale, eCalifornia? Le yimbali ebonwayo, ingxelo yobomi babakhenkethi bangaphambili. ”
Ngethamsanqa, uninzi lweehotele zakudala zigcinwa kula makhadi amibala-bala ayimibala eyahlukileyo kwincwadi ethi "Wish You Here" Nazi ezona zilungileyo kuzo: